गोपनीयता नीति - पोशाक उतार लेना मलाई
• अघि वा व्यक्तिगत जानकारी सङ्कलन को समयमा, हामी जानकारी संकलन भइरहेको छ जसको लागि उद्देश्य पहिचान हुनेछ.
• हामीले सङ्कलन र हामीलाई द्वारा र अन्य उपयुक्त उद्देश्यका लागि निर्दिष्ट ती उद्देश्य पूरा को उद्देश्य संग केवल व्यक्तिगत जानकारी प्रयोग गर्नेछ, हामी वा फिक्री व्यक्तिगत को सहमति प्राप्त नभएसम्म व्यवस्था आवश्यक.
• हामी केवल व्यक्तिगत जानकारी ती उद्देश्य पूरा लागि लामो रूपमा आवश्यक रूपमा राख्ने हुनेछ.
• हामी न्यायसंगत र उचित माध्यम र द्वारा व्यक्तिगत सूचना जम्मा गर्ने, जहाँ उपयुक्त, फिक्री व्यक्तिगत को ज्ञान वा सहमति.
• व्यक्तिगत डाटा यसलाई प्रयोग गरिएको छ जसको लागि उद्देश्य सान्दर्भिक हुनुपर्छ, र, ती उद्देश्यका लागि आवश्यक भएको हदसम्म, सही हुनुपर्छ, पूरा, र माथि-गर्न-मिति.
• हामी हानि वा चोरी विरुद्ध उचित सुरक्षा सुरक्षा द्वारा व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित हुनेछ, रूपमा अनधिकृत पहुँच साथै, प्रकटीकरण, प्रतिलिपि, प्रयोग वा परिमार्जन.
• हामी हाम्रो नीति र अभ्यासहरू व्यक्तिगत जानकारी व्यवस्थापन सम्बन्धी बारेमा ग्राहकहरु जानकारी सजिलै उपलब्ध हुनेछ.
हामी व्यक्तिगत जानकारी गोपनीयता सुरक्षित र कायम हुन्छ भन्ने सुनिश्चित गर्न अनुसार यी क्रममा सिद्धान्त हाम्रो व्यापार सञ्चालन गर्न प्रतिबद्ध छन्.